Amaahda Ardayga ee La Kabo Vs Aan La Kabayn: Midkee Ayaa Aad U Tagi Kartaa? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Amaahda Ardayga ee La Kabo Vs Aan La Kabayn: Midkee Ayaa Aad U Tagi Kartaa?
Isha sawirka: credible.com
Amaahda ardaydu waxay culays wayn ku noqon kartaa kuwa aan garanayn sida loo maareeyo. Waxaa jira noocyo badan oo deyn ah oo kala duwan qaarna waxay la yimaadaan shuruudo ka wanaagsan kuwa kale.
Halkan, waxaan ku eegi doonaa laba ka mid ah noocyada ugu caansan: la kabo iyo kuwa aan la kabin. Amaahda la kabo waa kuwa ay dawladdu bixiso dulsaarkaaga inta lagu jiro wakhtiga aad dugsiga ku jirto.
Amaahda aan la kabayn dawladdu ma kabto markaa waa inaad iska bixisaa dantaada markaad dugsiga ku jirto ama ka dib markaad qalinjabiso. Dadka qaar ayaa sidoo kale ku khalda deymaha ardayda la kabo iyo kuwa aan la bixin ee Perkins Loans, laakiin kuwani maaha wax la mid ah.
Maqaalkani wuxuu dabooli doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kabitaanka vs aan la kabin.
Waa maxay Amaahda la Kabo?
Faa'iidada ugu weyn ee amaahda ardayda federaalku waa inay cashuur dhaafaan. Dhib malaha heerka dakhliga aad leedahay. Taas macnaheedu waa haddii aad iskaa u shaqeysato, oo aad sameyso $15,000 sannadkii, markaas ma bixin doontid wax canshuur ah dakhligaas.
Lacagtaas waxaad u isticmaali kartaa waxbarasho sare.
Waxa deymahan ka dhigaya mid soo jiidasho leh waa inaadan wax dulsaar ah ka bixin inta aad waxbarashada ku jirto.
Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay inaad bixiso lacagta ugu yar ee deynta ardaygaaga. Waxa kale oo jira doorashooyin dib-u-bixineed ku salaysan dakhli oo ay heli karaan dadka dakhligoodu badan yahay si ay ugu qalmaan deymaha aan dulsaarka lahayn.
Akhri Sidoo kale: 10 Amaah Bilowga Ganacsiga 2021
Waa maxay deymaha aan la kabin?
Amaahda aan la daboolin asal ahaan waa deyn aad u qaadato waxbarashadaada. Waxaad u isticmaali kartaa deymaha aan la kabin labadaba waxbarashada shahaadada koowaad iyo kan qalin-jabinta.
Tusaale ahaan, waxaad aadi kartaa dugsi oo waxaad deyn ka heli kartaa deyman gaar ah oo loogu talagalay waxbarashadaada shahaadada koowaad, laakiin markaa waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo inaad lacag bixiso dawladda markaad gasho dugsiga sare.
Halkani waa meesha ereyga "kabid" uu ka soo baxo. Dawladdu waxay kabaysaa heerka ribada ee qaar ka mid ah deymaha ardayda ee aan la kabin.
Tani waxay ka dhigan tahay in deyntaadu ay weli yeelan doonaan dulsaar, laakiin waxay noqon doonaan kuwo la awoodi karo. Baaxadda deymahaagu wali way kordhi doontaa, laakiin waxaad awoodi doontaa inaad bixiso lacagahaas.
Arag sidoo kale: 10 Amaah Ganacsi Oo U Wanagsan Amaahda Xun
Amaah Ardayga La Kabo Vs Aan La Kabayn
Marka ay timaado in deynta ardaygu la kabo ama aan la kabin, su'aashu waxay noqotaa mid adag, laakiin dhab ahaantii waa mid fudud.
Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya labada waa in deynta la kabo, ay tahay inaad bixiso dulsaar. Amaah aan la kabin, kuma samayn.
Halkan waxaa ah tusaale fudud: aan nidhaahno waxaad kuleejka ku aadday deyn la kabay. Ka dib qalin-jabinta, waxaad shaqeysaa saddex sano oo aad go'aansatid inaad aado dugsiga sare ee Jaamacadda Arizona.
Amaahda lagu kabo waxaa weli ka harsan saddex sano, markaas waxaad bixin doontaa ribo ilaa ay ka dhacayso. Saddex sano ka dib, jaamacaddu waxay ku amaahin doontaa lacagta aad uga baahan tahay dugsiga, waxaadna dib ugu siin doontaa dulsaar hoose dhowr sano.
Marka amaahdaada la kabo dhammaato, waxaad awoodi doontaa inaad bixiso deynta ardayga ee caadiga ah.
Hubi Sidoo Kale: Amaahda Ganacsiga Yaryar 2021 Taas oo Ku habboon Ganacsigaaga
Waa maxay Amaahda Ardayga ee La Kabo Iyo Aan La Kabayn?
Sida magacaba ka muuqata, amaahda ardaygu waa amaah ay dawladdu kabto. Kuwani waa deymo loogu talagalay shakhsiyaadka ka soo jeeda qoysaska hoose iyo kuwa dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay oo xiisaynaya shahaado goob u qalmida.
Amaahda ardaydu caadi ahaan lama kabayo laakiin waxa lagu dabaqi karaa dulsaar yar inta lagu jiro dugsiga ama inta lagu jiro sannadaha ugu horreeya ee lacag bixinta. Tani waa sababta oo ah waxaad gacan ka geysaneysaa hoos u dhigista qiimaha guud ee waxbarashada.
Amaahda la kabo guud ahaan way ka wanaagsan yihiin deymaha aan la kabin sababtoo ah waxaad bixinaysaa ribo yar inta lagu jiro sannadahaaga waxbarasho.
Si aad ugu qalanto amaahda la kabo, waa in aad iska diiwaan gelisaa machad waxbarasho oo u qalma. Inta badan dadka haysta deymaha ardaydu waxay leeyihiin deymo aan la kabin markaa tani waa waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan dalban kaaga.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha mid walba
Labada nooc ee amaahda ardaydu siyaalo qaar bay is barbar dhigaan. Tusaale ahaan, amaahda la kabo iyo kuwa aan la kabin labadaba waxay diyaar u yihiin kuwa wada shahaadada koowaad ee jaamacadda ama ka sare.
Si kastaba ha ahaatee, kuwani maaha labada doorasho oo keliya. Tusaale ahaan, waxaa jira noocyo kala duwan oo amaah arday federaal ah kuwaas oo dabooli doona waxbarashadaada iyo kharashyada noloshaada machad gaar ah.
Kuwa u baahan qorshe maaliyadeed oo dabacsan, sida kuwa raba inay ku noqdaan dugsiga, waxaa jira amaah arday gaar ah oo si gaar ah waxtar u leh.
Sida aad filan karto, waxaa jira faa'iidooyin iyo faa'iido darro mid kasta oo ka mid ah ikhtiyaarrada amaahda ardayga ee kala duwan. Hoosta, waxaan sahamin doonaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha mid kasta oo ka mid ah noocyada.
Fahmidda Heerarka Dulsaarka ee Amaahda Ardayga ee la kabo iyo kuwa aan la kabin
Kahor inta aynaan galin amaahda kuugu fiican, waxaa muhiim ah in la fahmo sida heerka dulsaarku u shaqeeyo mid kasta. Marka ugu horraysa ee aad codsato deymaha la kabo, heerka dulsaarka aad ku dambayn doonto bixinta ayaa caadi ahaan ka yar 5%.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira shuruudo gaar ah oo go'aaminaya heerka dulsaarka aad ku dambayn doonto bixinta. Haddii aad aado dugsi leh muddada dib-u-bixinta amaahda ah ee ka badan afar sano, heerka dulsaarka ay kugu soo dallici doonaan waxay ku xiran tahay buundada deyntaada.
Markasta oo ay sareeyso buundada credit-ka, waa badnaanta heerka dulsaarka aad bixin doonto.
Marka aad dugsiga dhigto 12 sano ama ka badan, waxay kor u qaadi doonaan dulsaarkaaga 6%. Waxaad ka bixin kartaa dulsaar sare deymahaaga aan la kabin haddii aad seegto lacag bixinta.
Sidee Loo Codsadaa Amaah Ardayga La Kabo Iyo Aan La Kabinayn?
Dawladda federaalku waxay siisaa deyn la kabo kuwa u qalma. Kuwa haysta dakhli qoys oo ka yar $80,000 oo qaatay lacag badan oo amaah arday ah waxbarashadooda waxay inta badan xaq u leeyihiin deyn la kabo.
Heerarka dulsaarku aad bay u jaban yihiin marka loo eego noocyada kale ee deymaha, sida deymaha gaarka ah. Waxaad lacag bixin kartaa 20 ama 25 sano adiga oo aan wax lacag ah lagaa qaadin.
Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah waa inaad bixisaa dulsaar inta aad dugsiga ku jirto ama ka dib qalin-jabinta, waxaa laga yaabaa inaad qaadato deyn PLUS, taas oo inta badan lagu heli karo dulsaar hoose.
Haddii aad codsanayso deyn la kabo, waxaa laga yaabaa inaad keento dukumeenti xaaladaada dhaqaale.
Goorma ayay tahay inaad Hesho Amaah Kabid?
Dowladda Federaalka ayaa dejisa heerka dulsaarka deymaha la kabo ee ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda. Sida hoos timaada Waxbarashada Dhammaan Hand-Ade-Downs iyo Barnaamijyada Amaahda Aan La Kaabsanayn, heerka dulsaarka waa go'an si lagugu soo dalaco isla qiime isku mid ah labada sano. Waxay caadi ahaan ku sii jirtaa inta u dhaxaysa 4.63 boqolkiiba ilaa 6.8 boqolkiiba.
Si kastaba ha ahaatee, ardayda aan helin kaalmada dhaqaale, si kastaba ha ahaatee, waxaa inta badan lagu soo dalacayaa ribo deymo aan la kabin, inkastoo qiimahani uu kala duwan yahay iyadoo ku xiran xilliga dib u bixinta. Goorma ayay tahay inaad hesho amaah aan la kabin?
Heerka dulsaarka deymaha aan la kabayn waxaa dejiyaa suuqa gaarka loo leeyahay, wayna kala duwan tahay. Heerarka ayaa inta badan ku dhow 8.6 boqolkiiba ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo 9.2 boqolkiiba ardayda qalin-jabisa. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah deymaha ay dawladu kabto ayaa laga yaabaa xataa in ka badan.
Waa kuwan laba xilli oo waaweyn oo aad ku heli karto deyn la kabo:
Bilowga waxbarashadaada marka aad rabto inaad dugsi aado dugsi ka jaban
Xitaa ka hor intaadan dhameysan shahaadadaada
Haddii aanad dooran mid ka mid ah labadan doorasho, waa inaad adigu iska bixisaa kharashkaaga dantaada inta aad waxbarashada ku jirto. Markaad dhammayso waxbarashadaada, waxaad heli doontaa dib u bixinta deynta ugu badan ee bishii.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto amaah xitaa ka hor intaadan dhameysan waxbarashadaada. Haddii aad hubto inaad rabto inaad wax walba samayso oo aad rabto inaad yarayso kharashka, markaa waa inaad qaadato amaahda ka hor intaadan dhameysan waxbarashadaada.
Waxay noqon kartaa ikhtiyaar ka wanaagsan in la isku geeyo dhammaan amaahahaaga arday hal sababtoo ah waxaad kaydin doontaa lacag bil ilaa bil.
Goorma Ayaad Heli Kartaa Amaah Aan La Kaabinayn?
Marka hore, aan ku bilowno farqiga u dhexeeya amaahda aan la kabayn iyo deynta la kabo. Amaahda aan la kabin waxay ka dhigan tahay inaad bixinayso ribo laga bilaabo maalinta aad bilowdo bixinta deyntaada ilaa maalinta aad qalinjabiso.
Waxaad dooran kartaa inaad rabto inaad si buuxda u bixiso ama ay ku siiyaan qaddar ku salaysan dakhliga amaahiyaha. I
Haddi aad jidkan marayso, dulsaarka daynku wuxu noqon doona mid sare, waxana jiri doona wakhti gaaban oo ribo ah oo uu iska bixinayo. Amaahda aan la kabin kuma habboona qof kasta oo u baahan inuu deynta ka baxo sida ugu dhakhsaha badan.
Sidoo kale, Amaahda ardayga ee aan la daboolin waxay bixiyaan dulsaar waxyar ka sarreeya deynta la kabo. Si kastaba ha ahaatee, uma baahnid inaad bixiso mid ka mid ah dulsaarka inta lagu jiro dugsiga ama markaad dugsiga ku jirto.
Lixda bilood ee ugu horreeya dugsiga, dulsaarka ayaa ka hoosayn doona ribada amaahda oo leh dulsaar la kabo. Intaa ka dib, dulsaarka deynta aan la kabin ayaa ka badnaan doonta deynta la kabo.
Dulsaarka deymaha la kabo ayaa markaa la hagaajin doonaa sannad kasta ilaa qalin-jabinta. Tani waa sababta deymaha aan la kabin ay aad ugu wanaagsan yihiin. Way jaban yihiin mana aha inaad ka walwasho lacag bixinta ka dib qalin-jabinta.
Dhanka kale, amaahaha la kabo waa kuwo la awoodi karo oo uma baahnid inaad ka walwasho lacag bixinta gabi ahaanba.
Amaahda La Kabo Iyo Aan La Kabayn: Keebaa Wanaagsan?
Tani miyay toosan tahay sida ay u dhawaaqdo? Aynu marka hore eegno faraqa u dhexeeya noocyada daymaha. Haddii aad akhrinayso maqaalkan, waxay u badan tahay inaad hore u taqaanay sida loo maamulo amaahda bangiga, amaahda baabuur, iyo noocyada kale ee amaahda.
Uma baahnid inaad wax yar ka fahanto deymaha ardayga, laakiin waxaa jirta sheeko ka badan tan caadiga ah “amaahiyuhu wuxuu bixiyaa qaddarka deynta muddo go'an.
Amaahda la kabay waxay dawladda Maraykanku bixinaysaa qayb ka mid ah ribada aad bixiso markaad dugsiga ku jirto. Tani waxay ka dhigaysaa inay u dhawaaqaan sida godsend, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah digniinaha waaweyn ee la tixgeliyo.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya deymaha la kabo iyo kuwa aan la kabin waa inta ay tahay inaad dib u bixiso deyntaada.
Waxaa muhiim ah in la ogaado farqiga u dhexeeya deymaha ardayda la kabo iyo kuwa aan la kabin oo la fahmo faraqa muhiimka ah ee u dhexeeya labada. Ugu dambeyntii, doorashadu waxay ku xirnaan doontaa xaaladdaada dhaqaale iyo nooca waxbarashada aad raadineyso.
Warka fiicani waa in dhammaan deymahan ay yihiin hab degdeg ah oo lagu bixiyo kharashka waxbarashadaada. Akhbaarta xun ayaa ah in ay waqti qaadaneyso in aad iska bixiso deynta ardaygaaga.
Taas marka la yiraahdo, ma jirto jawaab sax ah ama khalad ah oo daynta kuugu fiican. Way fiicantahay inaad hesho amaahda aad u qalanto, laakiin ha u qaadan in sababtoo ah waxaad u qalantaa, waxay kuu noqon doontaa adiga kuu fiican. Had iyo jeer way fiican tahay inaad la gasho qorshe weerar oo aad sameyso xoogaa cilmi baaris kahor intaadan saxiixin dukumeenti deyn ah.
Isku soo wada duuboo, qiyaas wanaagsan ayaa noqon doonta haddii aad si buuxda u shaqeyso oo aad xisaabta sameyso, waxaad kaydsan doontaa in ka badan $300 bishii. Taasi maaha in la xuso dulsaarka amaahda ardayga mustaqbalka ee aad ku badbaadin doonto markaad jidkan marayso.
Waxaa jira sababo badan oo loo maro jidkan: Waa daynta ugu fiican ee qof booskaaga jooga, oo waxaad leedahay deynta ugu yar ee noloshaada markaad baxdo.
Waaxda waxbarashadu waxay haysaa macluumaad badan oo ku saabsan deymaha ardayda boggeeda internetka. Waxay haystaan ​​ilo iyo barnaamijyo waxtar u leh kuwa isku dayaya inay helaan ikhtiyaarka ugu fiican naftooda.
Hubi inaad hubiso shabakadooda iyo agabkooda, ka dibna u bax halkaas oo u bax si aad adigu go'aan uga gaarto.
Zipcar Miyuu Xalaal Yahay Ama Fadeexad? Sidee Zipcar u shaqaysaa 2022?
Dhawr usbuuc ka hor, waxaan kala hadlay deriskayga aan deriska nahay, Janet, waxaan ka wada hadalnay tiro aan toos ahayn…
Waa maxay Shirkadda Amaahda Mulkiileyaasha Gurigu? Sida ay u shaqayso
Deymaha aadista aad bay u fududahay waana waxtar leh, laakiin habka dib-u-bixinta ayaa had iyo jeer leh sida dhib badan…